अफगानिस्तानमा नेपाली मारिनुको कारण कतै यो त होइन ! | Jukson
अफगानिस्तानमा नेपाली मारिनुको कारण कतै यो त होइन !
आजभन्दा करिब एक महिनाअघि एक भारतीय चर्चित अनलाइनमा गोरखाली सैनिकको प्रशंसा गर्दै ‘अफगानिस्तान में घुसकर इस गोरखा ने अकेले ढेर कर दिए ३० तालिबानी आतंकी’ भन्ने शीर्षकको आलेख आयो । सो आलेखमा गोरखालीका अगाडि सारा विश्व नै झुकेको र हालसम्म पनि त्यसको प्रभाव रहेको चर्चा गरिएको थियो । त्यतिमात्र नभएर अफगानिस्तानमा गोरखाली बसेको क्याम्पमा तालिवानले आक्रमण गर्दा गोरखालीले वीरता देखाउँदै तालिवानविरुद्ध धावा बोलेको र १ गोरखालीले ३० तालिवानलाई ठाउँको ठाउँ ढालिदिएको विषयमा चर्चा गरिएको थियो ।
सो घटना सन् २०१० एक रातको हो, जतिबेला तालिवानले अफगानिस्तामा तैनाथ गोरखा सैनिक रहेको क्याम घेरेका थिए । सो क्रममा दीपप्रसाद पुन नाम गरेका एक गोरखा सैनिक हवल्दारले एक्लै ३० जना तालिवानलाई गोलीले उडाउँदै क्याम्प ध्वस्त पार्ने तालिवानको योजना विफल पारिदिएका थिए । यो घटना भएको ६ वर्षसम्म अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीमाथि त्यस्तो कुनै हमला भएको थिएन । तर, यसै विषयमा अघिल्लो महिना भारतीय मिडियामा आलेख आउनु र त्यसको एक महिना नहुँदै अफगानिस्तानमा तालिवानद्धारा नेपाली मारिनु के संयोग मात्र हुन सक्छ त ?
त्यसो त २०१० को सो घटनालाई तालिवानले बिर्सिसकेका पनि थिए होलान् । तर, भारतीय संचार माध्यममा गोरखालीले तालिवानलाई एकै चिहान बनाइदिएको प्रशंग केलाउँदै हालपनि विश्वमा गोरखालीले एउटा छाप छाडेको, गोरखालीको नामले विश्व अझै शतर्क हुने विषय उठाउँदै तालिवान मार्दा ब्रिटेनकी महारानी एलिजाबेथ द्धीतियले पुनलाई भव्य समारोहका बीच पदक चिन्ह प्रदान गरेको समेत खुलाइएको थियो । पछिल्लो समय भारतलाई आतंकवादीले निशाना बनाएको, केही भारतीय पनि आतंकवादी संगठनमा आवद्ध भएको समाचार बाहिर आइरहँदा सो आलेख तालिवानसम्म पुग्नु कुनै ठूलो कुरा भएन । जसका कारण उनीहरुमा पुरानो बदलाभावको सोच आएको पनि हुन सक्ने अनुमान यहाँ लेखेकले लगाएको छ । नत्र भने बिनाकारण तालिवानले निर्दोष नेपालीमाथि आतंकवादी हमला गर्नुपर्ने अरु कुनै कारण देखिदैन । गोरखाली र तालिवानलाई जोडेर सो आलेख आएको एक महिना नपुग्दै हमला हुनु अझ रहस्यपूर्ण छ ।
त्यसमाथि नेपाली सेनामा कार्यरत पूर्व सैनिकलाई नै निशाना बनाउनु सरसर्ती हेर्दा संयोगमात्र नभएको देखिन्छ । योजनाबद्ध रुपमा तालिवानद्धारा निर्दोष नेपाली मारिनुमा तालिवानलाई गोरखालीले एक चिहान बनाइदिएको आलेख जिम्मेवार हो भनेर किटान गर्न खोजिएको पक्कै होइन, तर ६ वर्षपछि सो विषयमा आलेख आउँदा १ महिनामै हमला हुनुमा कतै आलेखले प्रभाव त पारेन भन्ने प्रश्न चिन्ह भने पक्कै राख्न खोजिएको हो ।
गोरखालीका अगाडि तालिवानलाई हरुवा बनाएर आएको सो आलेख सामाजिक संजालमा हजारौँले शेयर गरेकाले पनि तालिवानसम्म पुगेको कुरालाई हामी नकार्न सक्दैनौँ । यस्तोमा आलेख आउनु, त्यसमा नेपालीले तालिवानको योजना विफल पारिदिएको, उनीहरुलाई बहादुरीका साथ गोलीले उडाइदिएको प्रशंक राखिनुले तालिवानमा बदलाभाव आएको हुनसक्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
हाम्रो मानव स्वभाव नै इष्र्या, रिस, राग, आक्रोश, बदलाभाव सँग अछुतो रहन सक्दैन । अझ तालिवान त दया, माया, प्रेरणा, सद्भाव आदीबाट टाढिएर आतंकवादी गतिबिधिमा लागेको संगठन हो, जो हत्या, हिंसा गरेकै विश्वसामू चिनिन चाहन्छ । आफ्नो संगठनको विरोध गर्ने, त्यसविरुद्ध लाग्नेको चिरहरण गर्नसमेत ऊ पछि पर्दैन । यस्तोमा गोरखा सैनिकको बहादुरीताको वाहवाह गर्दै गुनगान गाउनु र उनको अगाडि तालिवानलाई कमजोर शक्तिको रुपमा आँकलन गर्नुले तालिवानको आक्रोश बढेको त होइन भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । अफागानिस्तानमा निर्दोष नेपालीमाथि भएको हमलाबारे छानबिन गर्दा यसलाई पनि एउटा आधार बनाउने की ?
लेखक आचार्य अप्रिल फुल नामक उपन्यास बजारमा ल्याउने तयारी गर्दै छन् ।
- See more at: http://kathmandutoday.com/2016/06/199321.html#sthash.PbBoEi9r.dpuf
बाढीमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या २३ पुग्यो
विश्वका ६ महंगा कार : जुन नेपाली सडकमा हुँइकिन्छन्
पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको बजेट ४ अर्ब ३ करोड ८२ लाख
कानुनमन्त्रीसँगै बंगलादेशबाट छात्राहरुले गगन थापालाई दिए यस्तो जवाफ (भिडियोसहित)
राजधानीमा सुरु भयो राष्ट्रिय औद्योगिक वस्तु तथा प्रविधि प्रदर्शनी
करिनाको छोरा तैमुरको तस्बिर सोसल मिडियामा भाइरल